ဖြန့်ဖြူး Wanted - အာရပ်ကျန်းမာရေး 2018
Home/စာတိုက်/Uncategorized/ဖြန့်ဖြူး Wanted - အာရပ်ကျန်းမာရေး 2018
ဖြန့်ဖြူး အဆိုပါ Tekna မှာ Wanted Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း မှာ display အာရပ်ကျန်းမာရေးပြပွဲ နှင့်ကွန်ဂရက် 2018! Tekna သစ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရာပေါင်းများစွာကိုဖန်ဆင်းပြီးအလွန်ကြီးမား၏နံပါတ်ရောင်းချပြီ Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ကျနော်တို့နေဆဲ key ကိုနိုင်ငံအတော်များများကနေ Professional ကဖြန့်ဖြူးဘို့ရှာကြသည်ပြပွဲမှာစနစ်များပေမယ့်။ တို့က လာ. , Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများနည်းပညာအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖတ်ရှုပါ။ Tekna တစ်ဦးရှိပါတယ် hybrid ကို 4000 တဲအတွင်းခင်းကျင်းပြသ Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ဤတွင် Z1.C02!
အာရပ်ကနျြးမာရေးဟာ MENA ဒေသအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးပညာရှင်များ၏အကြီးဆုံးစုရုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်၏ 2018 ထုတ်ဝေပိုပြီး 4,200 103,000 + နိုင်ငံများမှကုမ္ပဏီများနှင့် 150 တက်ရောက်ပြထက်ကြိုဆိုမျှော်လင့်ရသည်။
ပြပွဲပူးတွဲ 19 စီးပွားရေး, ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အစွန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, နည်းစနစ်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဖြတ်တောက်ထဲသို့အလွန်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးပညာပညာရေး (CME) ကွန်ဖရကြလိမ့်မည်။
အာရပ်ကနျြးမာရေး 2018 ကနေအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ် 29 ဇန်နဝါရီ - 01 ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 ။ အဆိုပါပြပွဲသင်ပြပွဲမတိုင်မှီမှတ်ပုံတင်လျှင်သွားရောက်အခမဲ့ပါ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ Hyperbaric ကုန်သည်ကြီးများအသင်းစိတ်ကူးပါ! ကျနော်တို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့!
သငျသညျ 2009 အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့တည်ဆောက်သောခြောက်လလူတစ်ဦး Multiplace system ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်နဲ့ operate လုပ်ဖို့ထိရောက်သောကုန်ကျနေဆဲဖြစ်သည်။
By teknamfg|2018-02-01T08:43:31+00:00ဖေဖော်ဝါရီလ 1st, 2018|Uncategorized|ဟာ Off comments ဖြန့်ဖြူးအပေါ် Wanted - အာရပ်ကျန်းမာရေး 2018
ဒီပုံပြင် Share, သင့်ရဲ့ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ပါ!
Facebook ကတွစ်တာLinkedIn တို့RedditGoogle+ မှာTumblr သည်PinterestVkအီးမေးလ်ပို့ရန်